Home Somali News Somaliland: Guddida Ilaalinta Hantida Qaranka Oo Kormeer Ku Tagay Gobolka Hawd
Guddida ilaalinta hantida qaranka iyo dabagalka musuqmaasuqa ee golaha wakiillada Somaliland ayaa Safar shaqo ku tegay magaalada Baligubadle ee Xarunta gobolka Hawd, halkaasi oo maamulka Gobolka Hawd si diiran ugu soo dhaweeyay.
Kadib kulamo Saacaddo qaatay oo guddidu la yeelatay Maamulka gobolka ayaa guddoomiyaha gobolka Hawd saxaafadda la hadlay waxaanu sheegay in wakiillada wasaaraddaha ee gobolku yihiin kuwo aan u shaqayn sidii loogu talo galay.
Badhasaabka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin bookhashada guddida una mahadcelinayaan “ Waad aragtaan gobolka Hawd oo waana gobol dhisan, waana fiican yahay maanta, haddana hay’addihii dawladda waxaad moodaa inuu xar ku jiro xar, oo hoosta ayay ka yara waxaysan tahay. Waxaanu rajaynaynaa wasaaradduhuna inay isu duwayaasha ay soo magacaabayaan kharashkooda, shaqadooda iyo waxooda oo dhan u qoondeeyaan,” ayuu yidhi Badhasaabka Hawd.
Xildhibaan Xuseen Ismaaciil, Xildhibaan Qabile iyo guddoomiyaha guddida Maxamed Cali Xirsi, ayaa saxaafadda la hadlay iyagoo sheegay inay aad ugu mahadcelinayaan maamulka iyo bulshada gobolka soo dhaawayn iyo xog waraysi fiican siiyay. Waxay guddidu balanqaaday inay sida ugu fiican u soo bandhigi doonaan baahiyaha reer baligubadle u sheegteen.
Maamulka golaha degaanka Baligubadle ayaa sidoo kale kulan la qaatay guddida, iyagoo guddida u calaamadiyay dhawr taariikhood oo ah, in guddidu tahay xildhibaannadii qaran ee ugu horeeyay ee iyagoo hawl shaqo u socda yimaada gobolka, iyo sidoo kale inay yihiin xildhibaanno aan gobolka laga soo dooran sidoo kalena aan wadan masuuliyiinta gobolka laga soo doortay, taasina muujinayso siday hawshoodu u hufan tahay.
Inter Milan oo wada hadalo la fureysa Daley Blind